इन्टरनेट मन्त्रालयहरू - हाम्रा कर्मचारीहरूको टोली
मालिकको हाम्रो टोली
हामी समर्पित र भावुक छौं परमेश्वरका परिवार र सबैलाई प्रभु खोज्ने बारेमा। इन्टरनेट मन्त्रालयहरूले ईश्वरको लागि हराएका आत्माहरू जित्ने सेवकाईलाई प्रोत्साहन र लैजानुपर्छ।
"हे भगवान सधैं तपाईंको पहुँच भित्र जान्दछन्!"
- सिल्ब्ानो गार्सिया, II।
ओल्गा र म ख्रीष्टको मण्डलीहरूको भविष्यको बारेमा उत्साहित हुनुहुन्छ। हजारौ मानिसहरू मसीहमा बीस वर्षको अवधिमा हामी संसारमा अनलाइन भएको छौँ। प्रत्येक र अधिक से अधिक मान्छे को वचन को परमेश्वरको वचन र भगवान को चर्च को बारे मा सत्य खोज रहे हो। हामी प्रभु र परमेश्वरको परिवारको सेवामा हाम्रो पूर्ण गर्न प्रतिज्ञा गर्छौं। सबैलाई परमप्रभुको सामु बहुमूल्य छ, र हामी सबैलाई ख्रीष्टको सुसमाचार साझा गर्न चाहन्छौं। यो हाम्रो प्रार्थना हो कि तपाईं परमेश्वरको वचनको ज्ञान र पूर्णता र ख्रीष्टको कङ्गनमा बढ्दै जाँदा तपाईं नजिकको नजिक जानुहुन्छ।
परमेश्वरको मदतको साथ हामी तपाईंलाई आफ्नो संसारको सबै भागमा येशूलाई ख्रीष्टको सुसमाचार फैलाउनु आवश्यक उपकरण र ज्ञान प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ। प्रभु र उहाँको शक्तिको शक्तिमा बलियो रहनुहोस्। येशूले तपाईंलाई प्रेम गर्नुहुन्छ!
सीईओ / संस्थापक
हम्मन्ड बर्क चर्चको क्राइस्ट ब्रडकास्ट नेटवर्क निर्देशक हुनुहुन्छ - COCBN मा अनलाइन www.cocbn.com.
भाइ हम्मन्ड इन्टरनेटका माध्यमबाट विश्वव्यापी प्रचारकलाई बढावा दिन को लागी संयुक्त प्रयासमा इन्टरनेट मन्त्रालयमा सामेल भएको छ। बाह्र वर्षभन्दा बढीका लागि तिनी थुप्रै मण्डलीहरूलाई उनीहरूको प्रविधिको आवश्यकता संग सहयोग गरिरहेका छन्। उनले ख्रीष्टको चर्चहरू बीच डेलिभिजन स्ट्रीमिंग भिडियोको लागि डेलस, टेक्सासमा ख्रीष्टको माउंटेन हेराइ चर्चको साथ शुरु गरेका छन। हम्मन्ड बर्क र सिलबोनो गार्सिया, II सँगसँगै इन्टरनेशनल मन्त्रालयका इन्टरनेट इन्फ्रास्ट्रक्चर पुन: विकास र सुधार गर्न एकसाथ काम गर्दै छन्।
"यी दुई मन्त्रालयहरू ख्रीष्टका चर्चहरू वेबमा भर्खरै र ताजा टेक्नोलोजीको साथमा उपलब्ध गराउन आएका छन्। म ख्रीष्टको चर्चहरूलाई सुसमाचार प्रसार र वेब प्रविधिको प्रयोग गरी सुसमाचार फैलाउनको लागि सेट दिन र वर्षको बारेमा धेरै उत्साहित छु। यो मानक र प्रक्रियाहरू स्थापित गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो जुन चर्चका कर्मचारीहरूले आफ्नो उद्देश्यको म्याग्निफायरको रूपमा हाम्रो औजार प्रयोग गरेर सेवकाईमा ध्यान केन्द्रित गर्न अनुमति दिन्छ। " - हम्मन्ड बर्क
माइकल क्लार्कले इन्टरनेट मन्त्रालयलाई 1997 पछि कम्प्युटर प्रविधि सल्लाहकारको रूपमा सेवा गरेको छ। भाइ माइकलले टेक्नोलॉजीजको क्षेत्रमा बीस वर्ष भन्दा बढी अनुभव पाएका छन्। माइकलले स्प्रिन्टको लागि प्रणाली विश्लेषकको रूपमा काम गरेको छ, विन्डोड आईटी सल्युसनका वरिष्ठ सल्लाहकारको रूपमा वेरिजोनका लागि प्रणाली प्रशासकको रूपमा, र सञ्जाल इन्जिनियरको रूपमा सेवा गरेका छन्।
वर्षौंको दौडान माइकले हामीलाई राम्रोसँग सेवा गरेका छन्। 1997 मा हामी हामीलाई माइक्रोसफ्ट विन्डोज NT अपरेटिङ सिस्टम र पछि माइक्रोसफ्ट इन्टरप्राइज सर्भर अपरेटिङ सिस्टम को परिचय दिन को लागी सहायक था। त्यसपछि हामीले युनिक्स विन्डोज्ट सिस्टमबाट Microsoft Windows NT सर्भरमा सार्न निर्णय गर्यौ। आज हामी यूनिक्स विश्वमा फर्किएका छौं ताकि तपाईले संचालनको लागत बचत गर्न सक्नुहुनेछ। हामी आईटी सल्युल र सञ्जाल ईन्जिनियरिङ् सङ्गठनहरुमा माइकल को बल मा भरोसा गर्न सक्छौं।
इन्टरनेट मन्त्रालयहरूले उहाँलाई कम्प्युटरको परामर्शदाताको रूपमा आशिष् दिनुभएको छ। माइकल क्लार्क एक विश्वासी ईसाई र गारल्याण्ड, टेक्सासमा ख्रीष्टको शनि रोड चर्चको सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँ डलास, टेक्सास क्षेत्रको जेल जेलमा पनि सेवा गर्नुहुन्छ।
यूएनएनमा 10 वर्षको सेवा गरिसकेपछि, मलाई सक्रिय कर्तव्यबाट छुटाइएको थियो [र पछि एलसीडीआर, यूएनएनआरको रूपमा सेवानिवृत्त]। मेरो अर्को 23 वर्ष ईस्टमैन कोडक सहको लागि रोचेस्टर, एन.एन. मेरो काम बिजुली ईन्जिनियरको रूपमा थियो र व्यवसाय र व्यावसायिक उत्पादन प्रभागमा उत्पाद डिजाइन र निर्माण समावेश थियो। मेरो दोस्रो सेवानिवृत्त 52 मा ईस्टमैन कोडक प्रबंधन बाट थियो।
10 वर्ष पहिलेको बारेमा, मैले हाम्रो प्रभु र बुबाको कललाई मेरो प्रतिभा प्रयोग गरी वेबसाईट निर्माण र बनाए। कम्प्युटरहरू अब 50 वर्ष भन्दा बढीको लागि मेरो मुख्य अफिस उपकरण भएको छ। निम्न वर्षहरू प्रस्तुत गर्ने क्रममा मैले मित्र र चर्चहरूका लागि धेरै वेबसाइटहरू विकास गरेका थिए। ईन्टरनेटमा क्राइस्ट इन्टरनेट मन्त्रालयका चर्चहरू भेट्न पछि मेरी श्रीमती र मैले जून 2014 मा ख्रीष्टको डेल्टन चर्चमा बप्तिस्मा लिएका थिए। तपाइँ यहाँ क्लिक गरेर हाम्रो स्थानीय वेबसाइट र फेसबुक पृष्ठ [मैले मैले विकसित गरेको] हेर्न सक्नुहुन्छ www.deltona-church-of-christ.org
इन्टरनेटले हाम्रो विश्व वरिपरि द्रुत संचारको माध्यम प्रदान गर्दछ। हाल र नयाँ पोष्टहरू यो संसाधन कसरी प्रयोग गर्ने भनेर सिकिरहेका छन्। हामी, प्रचारकहरूको रूपमा, यो हाम्रो स्रोत र पुरुष र महिला हाम्रो प्रभु र मुक्तिदाता, येशूबारे सिक्न हाम्रो सभाहरूमा ल्याउनका लागि प्रयोग गर्नु पर्छ। यो मेरो बुबा हो र यसले परिणाम साबित गरेको छ।
ओल्गा गार्सिया इन्टरनेट मन्त्रालयको दैनिक सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। तिनी इन्टरनेट मन्त्रालयका लागि सचिवको रूपमा सेवा गर्छन्। हामी दैनिक रूपमा सैकड़ों इमेलहरू प्राप्त गर्छौं, र ओल्गाले हामीलाई विश्वभर महिला र युवा महिलाहरु बाट ईमेलहरूको जवाफ दिन्छ। बहिनी ओल्गा हाल नयाँ वेब विकास प्रविधिहरूको साथ काम गर्न सिकिरहेको छ जुन इन्टरनेट मन्त्रालय र ख्रीष्टको चर्चहरू अनलाइनलाई फाइदा उठाउनेछ। हामी हाम्रो टीममा उनीहरूको लागि साँचो आशिष् पाएका छौं।
"इन्टरनेट मन्त्रालयहरूले संसारमा पुग्नको लागि येशूलाई ख्रीष्टको सुसमाचार सुम्पने एउटा उत्कृष्ट गाडी हो। म सबैले गर्न चाहन्छु कि म प्रभु र उहाँको राज्यको सेवा गर्न सक्छु। परमेश्वर भयानक हुनुहुन्छ!" - ओल्गा गार्सिया